Arthur Bourgogne: mampifandray an’i Bolivia sy i Madagasikara | NewsMada
Fanondranana vehivavy an-tsokosoko any ivelany: aondrana atsy Kaomaoro vao alefa any Arabia Saodita ...mai 21, 2019
Campagne et administration: le PM insiste sur la neutralité ...mai 21, 2019
Arthur Bourgogne: mampifandray an’i Bolivia sy i Madagasikara
Par Taratra sur 05/02/2019
Mpampiray, mpampihavana, mpitondra hafatra, sns. Ireo rehetra ireo ny azo ilazana ity mpanakanto iray ity. I Arthur Bourgogne ny anarany, mpakasary matihanina. Roa taona lasa izay, nampahafantariny, tamin’ny alalan’ny sary, tany Bolivia any, ny mombamomba an’i Madagasikara.
Ny 7 hatramin’ny 14 febroary izao kosa, etsy amin’ny Is’art galerie etsy Ampasanimalo, ny mifamadika amin’izay no hoentin’i Arthur Bourgogne. Araka izany, ho maro ny hahafantatra bebe kokoa mikasika an’i Bolivia, ao anatin’ny fampirantiana mitondra ny lohahevitra hoe “Pachamafia”.
Hisongadina kokoa ao anatin’ireo sary, nalainy tany amin’ity firenena any Amerika Atsimo ity, ny tontolon’ny kolontsaina. Maromaro ireo fanontaniana napetrany tamin’ny nakana ireo sary. Anisan’izany ny hoe ahoana ny hampifandraisana ireo kolontsaina roa, izay samy manana ny fototra sy ny maha izy azy?
Tadiavin’ity mpanakanto ity ao anatin’ireo sary ny singa mety hitovizan’ireo kolontsaina roa avy amin’ny firenena samy hafa mihitsy ireo. Mifanalavitra tanteraka ny misy an’i Madagasikara sy i Bolivia, saingy zavatra tokana mety iraisan’ireo firenena roa ireo ny fahantrana. Asa, niteraka fitoviana eo amin’ny kolontsain’ny roa tonta izany?
Seranam-piaramanidina: omanina hiatrika loza voajanahary 22/05/2019
Fokontany dimy: nodiovina ireo lakandrano madinika 22/05/2019